Ugaaska Beesha Xawaadle oo ku geeriyooday Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ugaaska Beesha Xawaadle oo ku geeriyooday Muqdisho
Allaha u naxariisto waxaa goordhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ahaa Ugaaska Beesha Xawaadle.
Ugaaska ayaa ku geeriyooday Hotel ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana wararku sheegayaan inuu u geeriyooday xanuunka COVID-19.
Ugaaska ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa Muqdisho, tan iyo markii la guda galay dhismaha labaad ee dowlad Goboleedka Hirshabelle.
Allaha u naxariistee Ugaaska ayaa lagu xusuustaa sida uu uga soo horjeeday dhismihii dowlad Goboleedka Hirshabelle, xilligii dowladdii Xasan Sheekh
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Allaha u naxariistee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ahaa Duubabka dhaqanka Soomaaliyeed, kaasoo caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskiisa uga tacsiyadeeyay geeridiisa, waxaana uu Alle uga baryay inuu janatul Fardowso ka waraabiyo.
“Waxaa uga tacsiyadeynayaa qoyskii, eheladii iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka geeriyooday Ugaas Xasan, waxaan alle uga baryayaa inuu janatul Fardowso ka waraabihi, samir iyo iimaan uu Alle naga siiyo”ayuu yiri Madaxweyne Guudlaawe.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in Ugaas Xasan uu kaalin weyn ku lahaa nabadeynta iyo dowlad dhiska, gaar ahaan doorkii uu ku lahaa dhismaha Dowad Goboleedka Hirshabelle.
“Ugaaska waxaa uu ka mid ahaa ugaasyada faca weyn ee saldanada dhaqanka, wuxuu kaalin weyn ka qaatay dib u dhiska, nabadeynta, dib u heshiisiinta iyo dowlad dhiska ah”ayuu yiri Madaxweyne Cali Guudlaawe
dhanka kale Ra’iisal Wasaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xusseen Rooble ayaa ka tacsiyeey geeridii ku timid alle ha u naxariistee Ugaas Xassan Ugaas Khaliif oo caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa ehelka iyo qaraabadiisa iyo Ummadda Soomaaliyeedba uga tacsiyeeyey geerida naxdinta leh ee Ugaaka oo ka mid ahaa duubabka dhaqanka ugu waaweyn Soomaaliya.
“Waxaan qoyskiisa,Asxaabtiisii iyo guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ahaa duubabka dhaqanka Soomaaliyeed. Jannadii Firdows Allaha ka waraabiyo ehelka & ummaddana sabir iyo iimaan Allaha ka siiyo.”
Waxaa sidoo kale geerida Ugaaska tacsiyeeyay inta badan hoggaamiayaasha Soomaalida ku tilmaamay in uu ahaa geesi hal adag oo aan runta ka gabban, waxaana ay alle uga baryeen in uu jannadii ka waraabiyo.
Ugaaska ayaa rumeysan yahay in uu u geeriyooday Cudurka Covid 19 toddobadyadii ugu danbeeyay galaaftay nolasha dad badan oo magac iyo maamuus ku dhax lahaa bulshada.
Ugaaska Beesha Xawaadle oo ku geeriyooday Muqdisho was last modified: February 24th, 2021 by Admin
Beesha Caalamka oo ku baaqday markale in si deg-deg ah loo bilaabo wadahadalada doorashooyinka
Maamulka Degmada Xudur Oo Dhagax Dhigay Ceel Laga Hirgelinayo Magaalada “SAWIRRO”
Hay’adda WHO oo ogaatay in COVID-19 uu ka yimid Shiinaha
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ku sii jeeda Dhuusamareeb iyo Wafdi hordhac u ah…
Dhageyso qeybtii (4-aad) ee Barnaamijka Bidhaamiye
Akhriso:-Guddiga Arrimaha Dibadda Baarlamaanka oo walaac ka muujiyay mowqifkii dowladda ka qaadatay Khilaafka Khaliijka
DHAGEYSO:Aaden Saransoor Oo Koonfur Galbeed Ku Eedeeyay Caburin Siyaasadeed